Kwarantaini: Oge eruola ịrụ ọrụ | Martech Zone
Nke a bụ, na-enweghị obi abụọ, ebe azụmahịa na-adịghị ahụkebe na ọdịnihu a na-enyo enyo nke m hụworo n'oge ndụ m. Nke ahụ kwuru, Ana m ele ndị ezinụlọ m, ndị enyi m, na ndị ahịa m ụzọ abụọ:
Iwe - nke a bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, nke kachasị njọ. M na-ele ndị m hụrụ n'anya na ịkwanyere ùgwù na iwe na-akpasu onye ọ bụla iwe. Ọ naghị enyere onye ọ bụla aka ma ọ bụ onye ọ bụla. Nke a bụ oge iji nwee obi ebere.
mkpọnwụ - ọtụtụ ndị nwere a chere ma hụ omume ugbu a. Offọdụ n'ime ha na-eche ka a napụta ha… na m atụ ụjọ na ọ nweghị onye ga-anọ ebe ahụ.
ọrụ - M na-ele ndị ọzọ na-egwu ala. Na isi ego ha na-enweta na-agbaji, ha na-achọ ụzọ ndị ọzọ maka nlanarị. Nke a bụ ọnọdụ m - Ana m arụ ọrụ ehihie na abalị na-eweli mmiri iyi ndị ọzọ, na-akwụ ụgwọ, yana na-eme ka akụ m hapụrụ.
Na mgbere na itieutom mechie iberibe usoro na dị anya ọha iji belata mgbasa nke Nje Virus Corona, ndị mmadụ enweghị ihe ha ga-eme ma e wezụga ịnọ n’ụlọ. Ezie na nke a nwere ike lie ọtụtụ azụmaahịa, enweghị m ike ịjụ ma ihe kpatara ụlọ ọrụ anaghị anọ gafee na iji oge a eme ihe n'echiche, imepụta ihe, ma mejuputa ya.
Otu n'ime ndị ahịa m kacha mkpa ịhapụ m ka m gaa chebe ego ha na-enweta nke dabere na ụlọ akwụkwọ. Onyeisi ahụ kpọrọ m n’onwe m iji kọwaa ọnọdụ ahụ. Ọ ghaghị ichebe ụlọ ọrụ ya. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ọ bụ mkpebi kwesịrị ekwesị ma hapụ ya ka ọ mara na, na-akwụ ụgwọ ọ bụla, m ga-adị maka mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ mmejuputa iwu ga-enyere ha aka.
Onye ahịa a kapịrị ọnụ malitere ngwaahịa na ndị ahịa. Anyị na-adị nwayọ na ụma ka anyị wee ghara ịkwalite ngwaahịa ahụ iji nwalee ma melite ojiji ma hụ na agbakọtara ya nke ọma na nrụpụta ọrụ ha. M na-akọrọ ndị otu ya na nke a bụ oge kachasị mma ịbanye na gas, n'agbanyeghị. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Obere Nsogbu - ya na ndị ọrụ ọkpọ na iwu pere mpe na-abata, na-ewepụta sọftụwia na-ere ahịa na-akwalite ngwaahịa ga-abụ obere nsogbu n'ime ndị ọrụ ha. Ha nwere ike ijikwa nsogbu nke ịmalite ịmalite ngwaahịa ọhụrụ na sistemụ ọhụrụ iji kwado ya.
Oge maka Mmụta - ya na ndị ọrụ na-arụ ọrụ site na ụlọ, enweghị ike ịga nzukọ, na ịghara ịdọpụ uche ha n'okwu ọfịs, ndị ọrụ nwere oge dị egwu iji gaa ọzụzụ na itinye usoro ha chọrọ. M melite demos maka esịtidem mkpara ịga na-agba ume m mgbere-enyere ha aka ịtọọ oge oge ịga.
Usoro akpaaka - Ekwetaghị m na anyị ga-alaghachi azụmahịa dị ka ọ dị na mbụ mgbe ihe omume a gasịrị. Nsogbu zuru ụwa ọnụ anyị na-eche ihu nwere ike ịdị anyị, ile anya dị iche iche maka ịchebe agbụ anyị, yana ịgbanye layoffs iji chebe ụlọ ọrụ ka ha ghara ịbanye n'okpuru. Nke a bụ ezigbo oge maka ụlọ ọrụ iji tinye ego na itinye ego ha na-arụ ọrụ ka ha wee nwee ike ịga n'ihu na-emepụta ma na-ebelata ụgwọ.
Ndị ụlọ ọrụ: Oge eruola ka ị rụọ ọrụ
Aga m agba ụlọ ọrụ ọ bụla nọ ebe ahụ ume ka ha gaa ọrụ. Ndị ọrụ gị na-arụ ọrụ site n'ụlọ, nwee njikọta, ma nwee ike iji ọrụ n'aka itinye n'ọrụ na ọzụzụ na nyiwe ọhụụ. Mmekọrịta na ndị otu ntinye ọrụ na-arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ n'oge a, yabụ ndị ọrụ ngo dị njikere karịa ka ọ bụla enyere gị aka. Companylọ ọrụ m, Highbridge, na-abịa ụfọdụ echiche mwekota maka nzukọ nzute ọgụgụ isi iji nyere ụlọ ọrụ nwere gburugburu ọrụ ọrụ dịpụrụ adịpụ aka.
Ndị ọrụ: Oge eruola ịchụso ọdịnihu gị
Y’oburu na ibu onye oru gi no na nsogbu, oge a bu oge ka igba elu. Ọ bụrụ na m, dịka ọmụmaatụ, bụ onye na-a bartụ mmanya ma ọ bụ ihe nkesa… M ga-awụli elu n'ịntanetị ma mụta ọrụ ọhụrụ. I nwere ike ichere maka mgbapụta, mana nke ahụ bụ ihe enyemaka… ọ bụghị ogologo oge iji dozie nsogbu gị. Na ụlọ ọrụ teknụzụ, nke a nwere ike ịbanye maka n'efu N'ezie na Salesforce, na-ewere klaasị klaasị klaasị n'ịntanetị, ma ọ bụ ịmụ otu esi emeghe ụlọ ahịa nke gị na Etsy.
Nke a abụghị oge maka Playstation na Netflix. Nke a abụghị oge iwe iwe ma ọ bụ kpọnwụrụ akpọnwụ. Onweghi onye nwere ike ịkwụsị oke iwe nke Nne Nature. Ihe a ma obu ihe ndi ozo di egwu aghaghi izere. Nke a bụ oge iji ohere ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị na-etinyere gị ịga n'ihu. Ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ndị na-erite uru ugbu a ga-ebili ngwa ngwa karịa ka ha cheburu.
Ka anyị bido ọrụ!
Tags: akpaakanje CoronaCOVID-19mmeghasịEducationọrịanzaghachi oria ojoo